Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Soomaaliya oo Baadhaya Hawlgalka AMISOM.
Baarlamaanka Soomaaliya oo Baadhaya Hawlgalka AMISOM.
Posted by ONA Admin	/ November 8, 2018
Xilbibaannada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay hawlgalka AMISOM inay baaraan dil lagu eedeeyey inay ciidankoodu gaysteen oo shalay ka dhacay xaafadda Huriwaa ee magaalada Muqdishu oo ay ku dhinteen afar qof oo rayid ah.
Xidhibaanada ayaa si adag uga hadlay dhacdadan oo ay cadho ka muujiyeen sida ay AMISOM ula dhaqantay dadka shacabka ah ee aan waxba galabsanin. Ciidanka AMISOM ayaa weerar ku qaaday dad shacab ah oo marayay meel qarax AMISOM lala beegsaday uu ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ma’aha markii ugu horaysay ee AMISOM ay muwaadiniin Soomaali ah si badheedh ah u xasuuqdo. Falalka noocan oo kale ah ee ay AMISOM gaysatay ayaan waligood cidina kula xisaabtamin iyada oo aan cadaalada la hor keenin askartii shacabka gumaaday iyo waliba masuuliintii falalka noocan oo kale ah ka dambaysay.
Talaabadan uu Baarlamaanku qaaday ayaa muujinayso rajo wanaagsan iyo waliba kalsooni ay muujiyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Soomaaliya taas oo aan horaan looga baranin Baarlamaanka Soomaaliyeed.